Iflethi okanye indlu ekwicomplex iValldemossa-Lagune Leipzig (iofisi yasekhaya +) - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex iValldemossa-Lagune Leipzig (iofisi yasekhaya +)
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguPatrick
Wamkelekile kwindawo yeeholide "Valldemossa" (85 m²) eLake Hainer.
Ukongeza kwindawo entle kakhulu enokufikelela ngokuthe ngqo echibini kunye nombono omangalisayo weBlue Lagoon eLeipzig, indawo yethu yeeholide enefenitshala ephucukileyo ichukumisa ngefanitshala yayo ekumgangatho ophezulu kunye neenkcukacha ezininzi zothando.
Unokulindela amagumbi okuhlambela amabini (igumbi lokuhlambela elikhulu elineshawa kunye negumbi lokuhlambela leendwendwe), amagumbi amabini okulala aselwandle aneebhedi zebhokisi zasentwasahlobo kunye neewodrophu eziphangaleleyo. Ibhedi yomntwana iyafumaneka simahla. Eyona nto iphambili kwiflethi yethu yeholide yigalari enekona yokufunda epholileyo kwisitayile sakudala.
Kwigumbi lokuhlala, ibhedi ebanzi ikumema ukuba ukonwabele iTV emnandi kunye neengokuhlwa zomdlalo kunye nosapho okanye nabahlobo. Umbono ovela kwisofa ukuya emanzini awunaxabiso :).
Ikhitshi ikufuphi nendawo yokuhlala kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba izitya, umenzi wekofu, iketile, itoaster, ifriji, njl.
Enye into ebalulekileyo yi-terrace phezu kwamanzi kunye ne-jetty kunye neleli yokuhlamba. Igumbi lokuphumla elibanzi likumema ukuba uphumle ngorhatya olumnandi.
Indawo yegadi yiMeditera kwaye inebarbecue grill kunye nezihlalo.
Ukwanalo nokhetho lokuqesha isikhephe esincinci sokubheqa, isikhephe esinyovwayo okanye i-kayak yabantu aba-2 ngentlawulo encinci.
Siyathemba ukuba kungekudala siza kukwazi ukukwamkela kwiflethi yethu entsha kwaye sikunqwenelela ixesha elimnandi nelokuphumla.
EKahnsdorf kukho indawo entsha yokwakhiwa kwe-ayisikrimu kwisitayile saseMeditera, esisembindini welali. I-ayisikrimu kunye nekeyiki apha imnandi. Ngokuhlwa kukho izitya ezifudumeleyo. Kukho kwakhona iSchillerhaus. Le ibekwe kufutshane neKahnsdorf manor.